पुरुष क्रिकेट : सेमीफाइनलकाे समिकरण पुरा – Vision Khabar
पुरुष क्रिकेट : सेमीफाइनलकाे समिकरण पुरा
। ८ बैशाख २०७६, आईतवार २०:०४ मा प्रकाशित
काेहलपुर । आठौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता अन्तर्गत जारी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको समुह चरणका सबै खेलहरु सम्पन्न भएका छन । ७ प्रदेश र ३ विभागीय टोली प्रतियोगितामा सहभागी भएका थिए । बाँकेको कोहलपुर र भैरहवामा संचालन गरिएको प्रतियोगितामा एफिएफ र त्रिभुवन आर्मी क्लब समुह विजेता भएका छन । कोहलपुर अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न लिग चरणको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब समुह विजेता भएको हो भने प्रदेश नं. १ उपविजेता भएको छ । त्यसैगरी समुह ‘ए’ अन्तर्गत भैरहवामा संचालन गरिएको प्रतियोगितामा एपिएफ विजयी भएको हो । त्यसैगरी नेपाल पुलीस क्लब उपविजेता हुँदै सेमिफाईनल चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
कोहलपुर अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सेमिफाईनल र फाईल चरणका खेलहरु संचालन गरिने भएको छ । सेमीफाईनलमा समुह ‘ए’ काे विजेता एपिएफले समुह ‘ख’ काे उप-विजेता प्रदेश नं. १ सँग खेल्नेछ भने समुह ‘ए’ काे उप -विजेता नेपाल पुलिसले समुह ‘ख’ काे विजेता त्रिभुवन आर्मीसँग खेल्नेछ
यसैबिच कोहलपुर क्रिकेट मैदानमा आईतबार भएको छनौट चरणको अन्तिम खेलमा प्रदेश नं. १ विजयी भएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई ५० रनको फराकिलो रन अन्तरले हराउँदै प्रदेश नं. १ ले प्रतियोगितामा आफ्नो स्थान बलियो बनाएको छ । कोहलपुर अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा प्रतियोगिताको पाँचौ दिन भएको खेलमा कर्णाली प्रदेशले टस जितेर फिल्ड रोजेका थियो । पहिलो पारीमा मैदानमा उत्रिएको प्रदेश नं. १ ले निर्धारित २० ओभरमा १२३ रन जोडेको थियो । जसकालागी मुकुन्द यादवले ३२ रन जोडेका थिए भने राजन मगरले २३, पुष्प थापाले १७ र श्रवण यादवले १३ रन जोडेका थिए ।
बलिङतर्फ कर्णाली प्रदेशका जणेश विक्रम सिंहले ३ विकेट लिएका थिए भने दिनेश अधिकारी र प्रकाश जोशीले समान २र२ विकेट लिए ।
दोस्रो पारीमा १ सय २४ रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली प्रदेश ७३ रनमै समेटियो । कर्णाली प्रदेशले १८ दशमलव ४ ओभरमा आफ्नो सबै विकेट गुमाएको थियो । १ नं. प्रदेशका बलरहरुका अगाडी कर्णाली प्रदेशका खेलाडीहरु फिक्का देखिए । कर्णाली प्रदेशका रबिन्द्र जङ्ग शाही (१६), दिनेश पुन (१५), प्रकाश जैशी (१०) बाहेक अन्य खेलाडीहरुले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् । कर्णाली प्रदेशका खेलाडीहरुलाई सस्तैमा आउट गर्ने क्रममा प्रदेश नं. १ का खेलाडी फ्रिदोष अन्सारी, दिपेश कंडेल, पुष्प थापा र अभ्यास तिमल्सीनाले समान २/२ विकेट लिए भने मुकुन्द यादवले १ विकेट लिए ।
उक्त खेलको प्लेयर अफ द म्याच १७ रन जोड्दै २ विकेट लिएका प्रदेश नं. १ का पुष्प थापा घोषित भए ।